Sary avy amin'ny Anomalies Mars
Ny tsy fanarahan-dalàna mistery momba ny Mars
Satria nanomboka nanara-maso ny tontolo mena manerana ny lanitra ny olon-drehetra, dia fantatsika hatrany fa misy zavatra manokana momba an'i Mars. Na dia kely lavitra noho ny tany aza i Mars, dia ny planeta indrindra eto an-tany amin'ny rafi-masoandro misy ny endri-tsoratr'ity masoandro ity miaraka amin'ireo endriny ara-jeolojia mitovy aminy, anisan'izany ny caps glasy ary ny fisehoan'ny reniranon'ny renirano fahiny. Saingy misy fiainana ve eto amin'ny Mars? Na dia eo aza ny adihevitra manodidina ny meteorite Mars izay heverin'ny mpahay siansa fa misy fôsily amin'ny bakteria fahiny tahaka ny bakteria fahiny dia tsy misy porofo manamarina fa misy ny fiainana ankehitriny na eo amin'ny Mars.
Izany, na izany aza, dia tsy manapaka ny mety hisian'ny fiainana teo amin'ny Mars. Na dia tsy misy porofo mivaingana aza, misy sary sasantsasany nalefa avy amin'ny Mars Global Surveyor (MGS) sy ny fanandramana hafa izay mety hampiroborobo ny hoditra sasany.
Ity sary nalaina tamin'ny mpihaza Mars ity dia mampiseho zavatra roa miavaka izay mametraka amboamboarina mazava tsara amin'ny tany, ka mahatonga azy ireo ho toy ny mihantona na mitsingevana.
Ny zavatra eo ankavia dia nantsoina hoe "sotro" noho ny endriky ny taokantony tamin'ny farany, ary ny iray hafa dia nomena anarana hoe "hoverboard" noho ny tsy fitovizany amin'ny horonan-tsary hita ao amin'ny Back To The Future Films.
Mazava ho azy, NASA, mazava ho azy, dia nanaisotra ireo zavatra tao amin'ny sary fa tsy zavatra hafa noho i paradololie-fanitsakitsahana ny hazavana sy ny aloka. Milaza ny masoivoho fa "vatolampy hafahafa" fotsiny izy io -haingam-pandeha-vatolampy miaro ny fotoana amin'ny rivotra. Mahagaga, tena.
Na dia tsy azo inoana aza fa ny sobika sy ny hoveritera dia ny zavatra azon'izy ireo atao. Fa ny NASA dia tsy manadino ny tsy fanarahan-dalàna toy izany.
Martsa sy hazo
Porofon'ny zavamaniry velona amin'ny Mars ?. NASA
Ity sary, nalaina avy amin'ny Mars Global Surveyor (MGS) dia mijery tahaka ny sary momba ny lembalembon'ny tanimbolin'ny tany voasokitra miaraka amin'ny fitomboan'ny ala. Saingy ireo dongom-pasika dia any atsimo atsinanan'i Mars. Ny ekipa mpikaroka Hongroà, izay nanadihady ny sary (sy ny sary hafa ao amin'io faritra io ihany), dia nanatsoaka hevitra fa ny volo mainty dia tena zavamananaina.
Hazo sy Mars
Porofo ho an'ny zavamananaina ve ny Mars ?. NASA
"Ny lohataona tsirairay", hoy ny nosoratan'i David Leonard tao amin'ny lahatsoratra iray ho an'i Space.com, "ny [ny Hongroisiana], dia mipaka any amin'ny faran'ny gorodona ny 'fotsy maitso'. Any amin'ny tapany voalohan'ny lohataona, Ny alim-bolana dia manjavozavo eo amin'ny toerana iray ny donkazo maintimainty ary eo amin'ny manodidina azy no misy azy io. Io fihetsika mamerina io, ny ekipa dia manatanjaka, manatanjaka ny soso-kevitr'izy ireo momba ny antony ara-pahalalahana sy ara-biôlôjika amin'ny famolavolana ny toerana. "
Ny mpahay siansa Hongroà dia mamintina fa izany dia maneho mazava tsara ny fizotran'ny fiainan'ny zavamaniry sasany.
Ny NASA sy ny ekipa mpikaroka mifandraika amin'izany dia tsy manaiky an'io famaranana io. Ny teorin 'izy ireo dia ny "tara-pahazavana" dia vokatry ny fandalovan'ny lohataona amin'ny lohataona, fa tsy mariky ny biolojia. " Ny fanehoan-kevitra somary kely tsy misy dikany avy amin'i Bruce Jakosky, mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Colorado ao Boulder, dia milaza fa ny "famaranana ny biolojia Marziana dia" aloha loatra ... raha mbola tsy voafehy ny hafa, mora kokoa. "
Banyan trees ?. NASA
Sary hafa mampiady hevitra, aseho eto, dia mampiseho endrika lehibe kokoa izay toa manaparitaka ireo hazo izay hita etsy ambony. Tsy dia nisy olona marobe toy ny mpanoratra hajaina Arthur C. Clarke nanipika fa mitovy amin'ny hazo Banyan eto an-tany izy ireo. Nanamarika ihany koa izy fa toa miova ny endrik'ireo endrika ireo amin'ny vanim-potoana, mitombo ny hafanana ary mampitombo ny tara-masoandro amin'ny fotoan'ny lohataona Mars, toy ny zavamaniry. Fa ny NASA dia nanazava ireo endrika ireo ihany koa ho toy ny karazana tranga hafahafa na manimba na ampahany amin'ny "geology hafahafa" an'ny Mars.
Ny teoria tsirairay dia izany, na izany - ny teoria. Ny NASA dia tsy mahafantatra tsara noho ireo Hongroana hoe inona marina tokoa ireo endrika fanovana eo amin'ny tontolon'ny Martiana. Ny hany fomba ahafahana mijery ny sasany dia ny mitarika ny iray amin'ireo maria-nay marainanay ho avy any amin'ny faritra ary haka sary azy ireny. Toa sahala amin'ny mendrika ny miezaka mamantatra tsara.
Ary raha mbola ao amin'izany izy ireo, mety ho afaka mandefa fikarohana hafa izy ireo handinihana ireo toe-javatra marobe manjavozavo izay mihevitra fa toy ny hoe noforonin'ireo zavaboary manan-tsaina ireo. Jereo ireo ao amin'ny pejy manaraka.
Inona avy ireo endrika glasy endrika ?. NASA
Ny iray amin'ireo sary mahavariana indrindra, izay aseho amin'ny ankavanana, dia mampiseho ravin-kazo na tontolon'ny raozy. Ny ampahany voavakin'ny tanimboly, ny rafitra dia toy ny hoe nalaina (tsy navoaka?) Tamin'ny alalan'ny rafitra ara-jeolojia. Ny rafitra dia mitovitovy amin'ireo antsoina hoe "kankana glasy" hita any amin'ny sary hafa, na dia tsy ampy ny "transparante" na ny "lamosin'ny" kankana aza.
Ny toerana ofisialy NASA ofisialy amin'ireo rafitra ireo dia ny maha-voajanahary azy ireo ary raha ny marina dia "dine" - doro maitso maitso. Ny lahatsoratra hoe "Ity ve ny Fitrandrahana An-tsarintany amin'ny Mars" dia mampitaha ity saripika ity miaraka amin'ny sary hafa momba ny dian-dry Martian ankehitriny. Tsy mitovy hevitra izy ireo. Na dia toy ny dongom-pasika aza ny sarin'ny "tena" "dunes", dia tsy misy io rafitra feno herisetra io.
Tavoahangy glasy amin'ny Mars
Inona no tanjon'ireto rongony ireto ?. NASA
Ireo, tsy misy isalasalana, ireo zavatra tena mahavariana izay mbola sary eo amin'ny lafin'ny Mars. Mitovy amin'ny lava lava mamirapiratra izy ireo ary asiana arofanina mivelatra. "Vahoaka maro no nahita ireo rafitra hafahafa ireo ary nanandrana nanombantombana ny amin'izay mety ho azy ireo", hoy i Jeffrey McCann ao amin'ny The Research Abyss. "Ny sasany dia milaza fa ireo sehatry ny rano goavambe manondraka rano avy any amin'ny faritra iray mankany amin'ny iray hafa, ny hafa dia matanjaka amin'ny fiheverana fa izy ireo dia karazana voajanahary voajanahary tokana monja amin'ny Mars."
McCann sy Joseph P. Skipper, ireo mpikaroka ho amin'ny fomban-tany maritiora, dia miantso ity sary ity hoe "ny fiadiana amin'ny fifohana sigara ho an'ny fiainana eto Mars". Nahitana ny sary tamin'ny Jona 2000 tamin'ny sary maro navoakan'ny Malin Space Science Systems, izay ahitana sary marobe an'arivony hita ao amin'ny Internet sy ny fanadinana.
Hoy i Skipper ao amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Fanalana ny Anomaly "Tubes" (Mars): "An-tapitrisany maro no manimba ny morontsirak'i Mars, ka mamela ny adihevitra tsy misy farany momba izay tena izy, na voajanahary na fanorenana. ny fanamafisana ankapobeny ary ny fifandrifian-tsarimihetsika amin'ny tady na tsipika.Toy ny fiheveran'ny rafitra iray eto amin'ny hafa iray ary manamarika ny famaranana amin'ny famolavolana mamirapiratra eo amin'ny tondrozotra mba hamaritana mazava tsara azy io ho toy ny tetika henjehina mifanohitra amin'ny fanabeazana ara-jeolojia ny sasany Raha ny fahitako azy, dia misy iray na maromaro maromaro na andalany mitsivalana manodidina ny andaniny roa izay mampifandray azy ireo eo amin'ny tondrozotra izay mampiseho mazava ny fomba fanorenana. Tsy azo atao ny manontany azy ireo hoe inona avy izy ireny ary iza ary inona no antony? "
Ao amin'ny Misionan'i Richard Hoagland, Sir Arthur C. Clarke (mpanoratra tamin'ny 2001: Odyssey Space) dia voatanisa ho toy ny fanamarihana momba ny fantsona: "Mbola miandry fanazavana momba io kankana io aho [Mars]. .. Manao ahoana ny halehiben'izy io? Io no iray amin'ireo sary tsy mampino indrindra izay efa nipoitra avy eny amin'ny habakabaka ary tsy nisy ny fanehoan-kevitra [ofisialy] na inona na inona! "
A port for what ?. NASA
Ity saripika ity dia maneho ilay antsoina hoe "port", izay nodinihina tamin'ny antsipirihany tao amin'ny Mars Unearthed (tsy ao anaty aterineto intsony).
Io rafitra mareva-doko io, izay miseho eo amin'ny cliffside maritiora, dia toy ny trano fanorenana trano roa noforonina misy tanjona tsy fantatra. Araka ny hevitry ny lahatsoratra, "ny rindrina voalohany amin'ny rihana [eo amin'ny seranana] dia manoloana ny fakan-tsary sy ny aloka. Ny ambaratonga faharoa dia toerana voafaritra tsara ary mihodina amin'ny seza 45 degre eo amin'ny gorodona voalohany. Ny afovoan-trano ao an-tampon'ilay kianja faharoa dia faran'izay matevina tampoka ary misy faribolana tampoka ... 'paddy landing' toy ny helikoptera eny amin'ny trano avo sy eny amin'ny sambo. "
Eo akaikin'io rafitra io, ny lahatsoratra dia mitohy, dia lehibe, misokatra, U-endrika manana ny loharano na loharano izay mamoaka ranon-javatra be dia be.
Ny "Tower" dia toa mampiseho tilikambo lava na tapa-damba amin'ny tendron'ny fotsy mitsingiloka lava lava. Raha toa ka tilikambo karazana iray izy io, dia misy 6,3 kilometatra avo be izany - avo roa heny noho ny lehibe lehibe indrindra eto an-Tany.
Mety ho sary an-tsaina ve ireo "rafitra" ireo ny rafitra voajanahary voajanahary? Mazava ho azy. Fa ny fandroahana azy ireo amin'ny fomba tsy dia misy fiantraikany amin'ny fiaviana dia tahaka ny tsy fahampian'ny fahalalana fa izy ireo dia noforon'ny zavaboary manan-tsaina. Ny soso-kevitr'izy ireo hoe kanto dia fanambarana goavana toy izany, fa tokony hosaintsainina sy hisalasalana ireo sary ireo - fa amin'ny saina misokatra. Ireo sarin'ireo rafitra mitovitovy endrika ireo dia mety hamongorana ny endriny voajanahary amin'ny sary an-tsipiriany bebe kokoa, toy ny, amin'ny ankamaroan'ny fanadihadiana, ilay antsoina hoe "Face on Mars" dia namaha ny lehibe tao.
Aiza no nisy ireo vato ireo ?. NASA
Tamin'ny 14 febroary 2001, nisy vondrona iraisam-pirenena ahitana zazalahy sy zazavavy sivy 10 na 15 taona izay nanasa ny NASA mba hitantana ny fakantsary ao amin'ny Mars Global Surveyor (MGS). Rehefa naka ireo fanaraha-maso ny fakantsary ireo ankizy ireo, dia naka sary ny anomaly izay nahagaga ny mpahay siansa. Ity sary ity dia mampiseho ny fanaparitahana ireo vatolampy midadasika sy matevina eo afovoan'ny lemaka somary marefo sy mazava. Ny piozila dia: Avy aiza izy ireo? Tsy misy tendrombohitra na havoana lehibe izay mety ho tapaka ny vato. Ary ny lokony dia mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy any amin'ny faritra manodidina.
"Mahagaga izany," hoy i Michael Carr avy amin'ny Masoivohon'i Etazonia. "Nijery sary vitsivitsy aho [manodidina] ary tsy nahita na inona na inona hanazavako izany. Tena mahavariana tokoa izany!" Tsy misy filazalazana momba ny fitsangatsanganana izay mety handatsa-bato toy izany. "
Manao ahoana izy ireo? Tombanana fa eo anelanelan'ny 50 sy 80 metatra ny diamondra. Ireo vato be! "Indrisy, tototry ny totohondry ahy ireo," hoy i Ron Greeley avy ao amin'ny Oniversiten'i Arizona. "Ny loko maizim-borona dia tsy dia mahagaga loatra, fa miseho tanteraka ao anatin'ny tontolo manodidina azy ireo. Tsy misy na inona na inona ao ambadiky ny sary manolotra loharano ho an'ny vato lehibe toy izany, na ny fandaminana azy ireo. "
Ny teorinan'ny iray dia ny hoe ny vatolampy dia ny sisa tavela amin'ny meteorà iray izay manimba ny fiantraikany. Nefa tsy misy fiantraikany amin'ny kratera; ny mpilatsaka an-tsitrapo dia tsy maintsy nizotra moramora tsikelikely mba tsy hanamboarana crater ary hitazona ny sombiny ao anatin'io vondrona akaiky io. Tsy dia azo inoana loatra ny teorinan'ny teôria. Ny mpahay siansa momba ny planeta dia mbola tsy manana fanazavana mahafa-po ho an'ny vato.
Giza sy maritiora piramida
Giza sy maritiora piramida. NASA
Ny faritra Cydonia ao amin'ny Mars dia toa manjavozavo tanteraka amin'ireo rafitra manjavozavo. Ny atsimo amin'ny endrika "malemy" dia vondron'olona iray antsoina hoe "piramida" (eo ankavanana). Miaraka amin'ny lafiny bitika sy ny lafiny telolegny, dia mitovitovy amin'ny rivotra mankany amin'ny piramida ao Giza, Ejipta (ambony havia) izy ireo.
Iray amin'ireo fianarana mazoto indrindra ny antsoina hoe D & M piramida. Araka ny voalazan'ny mpikaroka Mark Carlotto, "ireo tarehy telo manazava ao amin'ny D & M dia toa miavaka amin'ny faritra voafaritra tsara eo anelanelany. Mipoitra ihany koa ny kofehy toy ny rafitra eo amoron'ny sisintany maromaro. Ao amin'ny sary MGS ny sisiny eo avaratra sy avaratra Ny tarehy dia mitovitovy amin'ny ravina mihazakazaka avy eo amin'ny tendron'ny D & M midina mankany amin'ny tany.Misy ambaratongam-pandrefesana ny avaratra amin'ny fihenan-tsofina na ny fanokafana, izay mitarika ho amin'ny hafanam-po fantsom-bokona havanana. "
Carlotto dia nandinika ihany koa ny "Pyramidan'ny Tanàna", andrin-jatony dimy izay ny andilany dia "mitovy amin'ny marika famantarana dimy an'ny kintana." Ao amin'ireo sary avo lenta misy ireo rafitra nalain'ny MGS ireo, ny pyramida dia somary sahala amin'ny piramida tahaka ny piramida, saingy mbola misy endrika manitikitika ny endriny geometrika.
Star City amin'ny Mars
Ny rafitra fanabeazana na ny fanabeazana voajanahary ?. NASA
Ny fanabeazana mahaliana hita eto dia nantsoina hoe Star City. Rafitra sarotra nambaran'ny mpikaroka sasany fa mampiseho ny rindrin'ny trano fanorenana.
Ny rafitra dia hita ao amin'ny faritra Syrtis Major Planum ary anisan'ny faritra lehibe amin'ny karazana hafahafa, ny geometrika ary ny hafainganam-pandehanana hafa izay mikaroka ho an'ny tontolo manerantany toy ny raozy sy ny tonelina.
Araka ny tanànan'i Star City, ireo orinasam-panjakana dia azo antoka fa manana fiaviana voajanahary: "Kômpeta lehibe sy tamboho, volkano niaviana, mandrakotra ny tontolo iainana, ary ny ampahany tamin'ireo domes dia nirodana, niteraka firafitra mahaliana. hollow ary mety hanome fialofana avy amin'ny tontolo matanjaka maria. "
Raha ny marina, ny fisehon'ny singa iray dia tsy midika hoe hoe izy io. Manomboka ihany isika vao mahatakatra ny toetr'andro, ny geolojika sy ny dingana arahan'i Mars. Mbola miady hevitra foana izy raha toa ka nisy oram-baratra nandalo ny Mars - ary mety mbola manao izany. Misy ihany anefa ny endri-javatra sasany eto amin'ity planeta hafahafa ity, izay tena manenina.
Moa ve ity sary ity maneho rano mangatsiaka na rano mikoriana ao Mars ?. NASA
Milaza ny mpahay siansa fa tsy dia misy dikany loatra ny fisian'ny rano mangatsiaka na mandroso amin'ny Mars, ary azo antoka fa tsy misy fiainana. Te-hahazo fanazavana tsara ho an'ity sary nalain'ny mpikarakara Mars Express ity izahay. Ao anatin'ny fahasamihafana amin'ny vatolampy mena manjavozavo eo amin'ny planeta dia ity aviavy "manga" mena ity ao anaty lavaka. Raha mahita an'io endri-javatra io isika ao amin'ny sarin'ny fiaramanidin'ny Tany dia ho tonga haingana fa rano iray.
Maro ny fanontaniana nipoitra: Moa ve ny loko marina? Tsy naneho ny loko toy izany tao anatin'ny sarin'izy ireo ny mpitsidika amerikana. Raha marina ny loko, inona no mahatonga azy ireny? Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany? Na manambara ny fisian'ny rano izy ireo ... na, ny tena mahavariana, karazana margàn-manga na maitso manga?
Golf Crater on Mars
Critter hafetsena na rafitra matevina ?. NASA
Ity ny iray amin'ireo kratera miavaka indrindra amin'ny Mars. Nalain'ny Mars Global Surveyor, ny sary dia maneho mazava tsara ny crater tsotra sy ny zavatra iray mahagaga ao anatiny. Ny foibem-pitantanana dia rafitra maitso toy ny kofehy, izay toa misy vatolampy amin'ny baolina golf ... na ny an'ny fanamboarana geodoa Buckminster Fuller.
Mahaliana kokoa, io kintana io dia manakaiky ny endrika tahaka ny rafitra misy tonelina na fitarihan-drano izay mihazakazaka ambony sy ambany ambanin'ny tany maria. Tanana kely no toa mampifandray amin'ny tionelina lehibe, toy ny karazana fandaminana goavana. (Misy jiro sy kintana mitovy amin'io amin'ity sary ity .)
Iza no nanangana io monolith io ?. NASA
Ity sarinà tetik'asa mistery iray eo amin'ny moron-dranon'i Mars ity dia nalain'ny Mars Reconnaissance Orbiter avy eo amin'ny 165 kilaometatra. Toa mampiseho haavon'ny vakoka tsy misy dikany ny geometrika. Mampahatsiahy avy hatrany ilay monolitha avy amina sarimihetsika 2001: Odyssey Space . Saingy ity kisary ity dia manintona?
Ny mpahay siansa iray avy amin'ny Oniversiten'i Arizona dia voalaza fa nilaza hoe: "Raha ny tena izy dia azo inoana fa ity boulder ity dia noforonina amin'ny fisakanana ny fonon-dry zareo mba hamoronana seho an-tsoratra mivantana." Raha izany no izy, aiza ny rindrina izay nopotehiny? Aiza ny vato izay nesorina mba hamoronana io endrika io? Toa hita taratra eo amin'ny sehatry ny tany ilay izy. Tsy afaka milaza isika fa zavaboary noforonina, mazava ho azy, saingy azontsika ampidirina ao amin'ny lisitra mitongilana amin'ny tsy fetezan-javatra mararin'ny sasany. .
Ny "monolith" ao Phobos. NASA
"Tokony handeha amim-pahasahiana izay tsy nandehanan'olona teo aloha isika - manidina amin'ny ketsa, mitsidika asteroïde, mitsidika ny volana Mars.Efa misy monolithy misy azy io. Tena tsy mahazatra ny endrik'ity karazan-javatra kely ity izay mandeha manodidina Mars iray ao anatin'ny fito ora. Rehefa fantatry ny olona izany, dia hilaza izy ireo hoe 'Iza no manao izany?' Eny, izao tontolo izao dia mametraka izany any. Raha misafidy ianao dia napetrak'Andriamanitra ao. "
Izany no tenin'ny Buzz Aldrin, lehilahy faharoa mandeha amin'ny Moon, mandritra ny fandaharam-potoana fankalazana ny faha 40 taonan'ny fiposahan'ny Lalao voalohany. Ary io ilay monolith izay resahiny. Ny antso an-tariby manazava ny sary etsy ambony dia nataon'i Efrain Palermo ho fanadihadiana ny zavatra.
Mars cricket. NASA, natolotr'i Rob Clay; animation nataon'i Stephen Wagner
"Vao haingana aho no nahaliana ny tsy fetezan-javatra ary toy ny sary avy amin'ny Mars Rover", hoy i Rob Clay. "Nanapa-kevitra aho ny hilalao ny lalao" manavaka ny fahasamihafana "miaraka amin'ireo sary nalaina tao amin'io toerana io ihany, tsotra ny teoriako: raha nisy zavatra hita tao anaty sary iray fa tsy tamin'ny iray hafa nalaina tany amin'io toerana io [amin'ny manodidina] dia tsy maintsy 'nibata' izany.
"Nahita zavatra tena mahaliana aho ary mampiseho fa misy ny fiainana eo amin'ny Mars, tsy zavaboary lehibe amin'ny fomba rehetra, fa toa ny tongotra ary toa tahaka ny bibikely. Nantsoiko hoe 'cricket' izany.
"Ao anatin'ity sary ity, ao amin'ny faritra ambany ankavia, dia faritra kely fasika, ary mitazona izany ny 'cricket' ahy. Eto amin'ity sary ity dia tsy hita ny cricket!
"Tamin'ny voalohany aho no nihevitra fa mety hanakona azy io ilay sambo marina, fa raha hitanao ny toeran'ny 'cricket' amin'ny vatolampy eo amboniny (miendrika kely toy ny Star Trek), dia tsy hita izy, noho izany dia mihetsika izy Jereo eto ny sary miaina eto.
Fiarandalamby ve ny Mars ?. NASA
Ny Sir Charles W. Shults III, ao amin'ny Torolalan'ny Fossil Hunter ho an'ny Mars, dia manolotra sary maromaro nalain'ny Fanahy ho avy amin'ny tontolon'ny Mars izay sahala amin'ny sahona toy ny tany. Ny iray amin'izy ireo dia aseho eto raha ampitahaina amin'ny tontolon'ny sahona (inset). Toa manana rafitra matevina sy endrika manify izy io. Raha vato izy ireo, dia vatolampy miavaka. Afaka mahita bebe kokoa eto ianao.
Ity ve ny tranobe eo amin'ny Mars ?. NASA / Google Mars
David Martines nilaza fa nitodika tany amin'ny Google Mars izy raha nahita trano lehibe toy ny trano tany amin'ny ilany avaratry ny planeta. Antsoiny hoe "Bio-Station Alpha", izay mazava ho azy fa tsy ny tena anarany, fa heveriny fa misy olona iray na zavatra miaina amin'izany. Manombantombana i Martines fa maherin'ny 700 metatra ny lavany ary 150 metatra ny sakany. Azo jerena ao amin'ireto manaraka ireto amin'ny Google Mars: 71 49'19.73 "N 29 33'06.53" W
Nisy mariazy teo aloha ve nandao ny fatiny? Izany no mampiavaka azy io.
Ireo vato ireo dia mazava ho azy, mazava ho azy, saingy ny endriny hafahafa dia mahatonga azy ireo ho tahaka ny namoronana azy ireo. Tahaka ny ampahan'ny zavatra nataon'olombelona izy ireo ... na maria-vita. Misy endrika hafahafa hafa koa amin'ity sary ity.
Martian Finger. NASA
Ity sary ity, nalaina tamin'ny mpihaza Curiosity tamin'ny Mars, dia mampiseho zavatra iray izay tena mitovy amin'ny rantsantànan'olombelona, ​​feno rantsan-tànana.
Mazava ho azy fa mahita lafiny iray fotsiny isika, ka tsy afaka milaza isika raha mbola tahaka ny rantsantanana avy amin'ny andaniny rehetra izany. Ny sasany dia nanolotra hevitra fa rantsan-tànana fossilized avy amin'ny maritiana iray na rantsantanana iray tapaka avy amin'ny sarivongana maritiora.
Sa tsy izany fotsiny vatolampy hafahafa izay avy amin'iny teboka lehibe iny no mitranga amin'ny rantsan-tànana?
"Rodent" ao amin'ny sarin'i Mars
"Rodent" ao amin'ny sarin'i Mars. NASA
Ity nalaina nalaina tamin'ny iray amin'ireo fakantsarin'i Curiosity mpitaingina ny planeta Marsa dia nantsoina hoe mpikiky Mars. Avy amin'ity teboka iray ity-ilay hany tokana omen'ny mpitaingina azy-dia mitovy amin'ny kisoa guinea izay hitanao any amin'ny fivarotana biby an-tanety rehetra eto an-tany.
Azo inoana ve fa io dia karazana marary hoditra marary? Raha izany no izy, inona no sakafo, satria toa tsy misy zavamaniry omena sakafo? Na izany aza, ilay zandriny dia toa salama tsara. Heveriko fa azontsika eritreretina fa misy karazana sakafo ety ambanin'ny tany, izay hitan'ny biby ao anaty lavaka.
Sa ve mety ny hoe sary an-tsarimihetsika izany, vatolampy iray izay maneso antsika amin'ny fahitana kiriodra bitika kely miaraka amin'ny orona, maso, ary angamba tongotra?
Mars mamirapiratra metaly metaly
Mars mamirapiratra metaly metaly. NASA
Ity misy zavatra hafahafa hafa, tsy dia misy dikany, izay maka sary eo amin'ny moron'i Mars noho ny mpihaza Curiosity. Ny sary dia nalaina tamin'ny datin'ny tany 30 Janoary 2013 ary manolotra zava-miafina tena izy. Ny felam-piravoravoana mamirapiratra dia kely-manodidina ny 0,05 cm na kely kokoa - ary hita ho tafiditra ao anaty vatolampy izay itiovana azy. Noho izany dia azo antoka fa tsy avy amin'ny mpitaingina azy mihitsy. Ny fahamaizinana dia midika fa firafetana metaly. Izany no azo atao:
Izy io dia natiora voajanahary voajanahary. Azo antoka fa ny metaly dia tsy maintsy niforona tamin'ny Mars araka ny fomba niorenany teto an-tany nandritra ny famoronana sy ny evolisiona. Ny vatolampy, izay notarafin'ny rivotra sy ny tain-tsetroka, dia nampiseho io volo tsara kokoa amin'ny metaly io.
Izy io dia artifisialy, novolavolaina, mety ho tranga tsy fantatra fahiny sy ny tanjona izay nanjary tafiditra tao amin'ny tontolon'ny tany Mars, izay nivadika ho vatolampy, ary nambara indray ny tontolon'ny rivotra sy ny fanodinana azy.
Dia inona izany? Azo antoka fa tsy maintsy miaiky isika fa ny voalohany dia azo inoana kokoa, na izany aza, ny farany dia mahafinaritra kokoa ny mandinika.
Tetezana eo amin'ny Mars
Tetezana eo amin'ny Mars ?. NASA / JPL
Ireo dia fanamafisam-peo sy fanatsarana sary iray nalain'ny iray amin'ireo mpilasy Mars. Amin'ny fiaviana dia misy ny formation izay tahaka ny lalambe na tetezana avo. Ny loko dia nampiana mba hampiseho mazava kokoa.
Sao dia misintona fotsiny ve ny sainam-pandrefesana eo amin'ny havoan-javatra ... sa izany porofon'ny sivilizan'i Marta taloha izany? Inona ny hevitrao?
Ity ny sary NASA / JPL voalohany .
Mars Thigh Bone. NASA
Ny fahalianana farany avy amin'ny planeta Mars, sary avy amin'ny mpiloka Curiosity tamin'ny 14 Aogositra 2014, dia zavatra iray izay toa tahaka ny taolana iray hafa. Ny mpanara-maso sasany dia nampitahaina tamin'ny taolana.
Tsy tokony hisy taolam-biby rehetra eto Mars, araka ny voalazan'ny mpahay siansa momba ny planeta, fa tsy mbola hita ao mihitsy ny fiainana - na dia tsy misy mikraoba aza. Ary azo antoka fa tsy misy porofo manamarina ny fisian'ny fiainana lehibe. Sa ve ity porofo ity?
Sa kosa vatolampy mahatalanjona iray mitovy amin'ny taolana? Ny lokony, ny tarehimarika, ary ny endriny, feno ny fivalozana mitovy amin'ny tendrony avy hatrany dia mahatonga ny mieritreritra taolana iray. Raha tsy misy fanadihadiana hafa, na izany aza, tsy azo sintonina ny famaranana, ary tsy fantatsika raha mikasa ny Curiosity ny NASA mba hijery akaiky kokoa.
Mety tsy izany. "Raha misy ny fiainana teo amin'ny Mars, nanantena ireo mpahay siansa fa ho vitsy kely ny fiainan'ny zavamananaina antsoina hoe mikroba," hoy ny NASA tamin'ny fanambarana an-gazety. "Azo inoana fa tsy ampy oksizenina tao amin'ny atmosfera sy tany an-toeran-kafa mba hanohanana ny zavamananaina sarotra kokoa ny Mars."
Na dia milaza aza ny mpandinika amoron-tsika sasany fa tena mety ny taolana amin'ny biby mariazy vahiny, ny hafa dia manolotra ny fitoviana amin'ny taolam-paty iray dia ny pareidolia - ny fironana eo amin'ny atidohan'ny atin'olombelona mba hahitana endrika mahazatra ao anaty rafi-pandrefesana.
Okay, angamba tsy totem polifika, fa inona kosa izany ?. NASA
Na izany aza, mety tsy maria totem polisy maria izany, fa inona no heck? Tahaka ny fanabeazana voajanahary ho anao ve izany? Misy fampiofanana voajanahary azo ampitahaina amin'ny tany ve?
Ary raha heverinao fa sary vita sokitra ity, ity ny sary nalaina tao amin'ny NASA voalohany .
Tahaka ny tontolon'ny endrika boribory miaraka amin'ny zavatra mihodinkodina eo aminy izay toa endriny sokitra amin'izy ireo. Ary ny zava-drehetra dia mijoro eo amin'ny sehatra iray mibaribary indrindra, tahaka ny nandevenana azy tany.
Lahatsary iray ao amin'ny YouTube, avy amin'ny www.whatsupinthesky.com manandrana mamakafaka izay antsoiny hoe "zavatra vita tanana", dia mijery ny sasantsasany amin'ireo valan-javaboahary manodidina azy ary manipika fa mety ho tapaka ny sakana.
Inona àry no eritreretinao? Fanorenana rock tsy dia mahazatra loatra? Sa zavatra hafa? Na izany na tsy izany, Mars dia toerana iray hafahafa.
Mars Attachment Vacuum Cleaner
Toa toy ny fandefasan'ny mpanadio vaksiny. NASA
Ity misy iray hafa mpikorontan-tsaina avy any amin'ny moron-dranon'i Mars izay nalain'ny iray tamin'ireo mpiloka. Moa ve tsy toy ny fefy fantsoratry ny basy? Mazava ho azy fa tsy izany no izy ... fa avy eo, inona izany. Ny endrika hafahafa sy ny lavaka boribory amin'ny farany (toy ny hoe fantsona fantsona) dia mahatonga azy ho toy ny zavatra vita vita.
Eny, mety ho zavatra voajanahary fotsiny no tsy hijerena tsara, fa tena mahagaga.
Saro-pantarina ve ny sivilizasiona marobe fahiny? Sa mety ho zavatra nataon'olombelona ihany no nesorina tamin'ny mpitaingina azy?
Ity ny sary nalaina avy amin'ny NASA.
Tahaka an'i Barack Obama ho anao ve izany ?. NASA
Eny, afaka mahita mazava tsara ny maso, ny orona, ny vava, ny volon-koditra isika rehetra-raha toa ka tena tsara sy mipetraka eo amin'ny lohan'ny olombelona. Izy ve no lohan'ny sarivongana iray avy amin'ny kolontsaina marobe fahiny? Sa ve ity toe-javatra iray hafa amin'ny pareidolia ity-mitady fomba mahazatra eo amin'ny vato tsotra?
Ny sasany aza milaza fa ny endriky ny endrika dia mitovitovy amin'ny filoha Barack Obama! Raha izany no izy, dia izy no lohan'ity rehetra ity!
Zavatra mandinika Mars ?. NASA
Moa ve Earthlings ihany no mandinika ny sisin'ny Mars?
Jereo ny lahatsary avy amin'ny Paranormal Crucible, avy amin'ny sary NASA rover, izay toa mampiseho ny jiro mihetsika manodidina ny moron'i Mars, toy ny fanadihadiana na ny fitadiavana zavatra.
"Tara-pahazavana" no hita tao amin'ny sarin'i Mars taloha, saingy nohazavain'ny NASA izy ireo ho toy ny taratra cosmic manapotipotika ny fitaratra. Ahoana anefa no ataonay amin'ny jiro mitranga?
Nankany an-dranomasina ve ny Maritiora? NASA
Ireo izay nanamboatra ireo sary dia niverina avy amin'ireo mpangalatra maritiora dia nanamarika io tsy fetezana io, ary nilaza fa toa ny sisa tavela amin'ny sambo izany. Mieritreritra i Mars fa nanana onja-na lakandrano sy ranomasimbe mihitsy aza-tamin'ny lasa lavitra, toy izany koa ve ny sambo Martiana? Sa ve ity tranga iray hafa ity amin'ny fahitana zavatra mahazatra ao anaty rafi-pandrefesana?
Isika rehetra dia mahazatra antsika amin'ny siramamy Sphinx any amin'ny tany efitr'i Giza, saingy milaza ny mpikaroka maromaro avy amin'ny ray aman-dreny fa ity saripika ity dia mampiseho sarivongana Sphinx toy ny tandrefana amin'ny planeta Mars.
Araka ny hitanao, dia tsy dia mazava loatra ny sary raha ny zava-drehetra-na inona izany na inona-dia lavitra lavitra ny fakantsarin'ny mpamily. Noho izany na dia hitantsika aza ny fitovian'ny rivomahery eto an-tany, dia tsy afaka milaza izahay raha havoana na havoana fotsiny izany ... izay mety ho izy.
Inona no mety hitifitra azy ?. NASA
Ity misy zavatra hafahafa amin'ny mason'i Mars fa ny mpanara-maso sasany dia mitovy amin'ny fitaovam-piadiana tahaka ny tanky na ny fiadiana amin'ny fiaramanidina. Hitantsika ny fitoviana: toy ny hoe misy vatana sy barika mitifitra manondro avo.
Sarotra ny milaza hoe inona marina izany tsy misy fijerena akaiky.
Inona anefa no tanjon'ireo Martiana ireo?
Ny Board Ouija: Tena Faharoa ve io?
Guide Picks - Horonantsarin'ireo Top 10 tsara indrindra
Ahoana ny fiasàn'ny boards Ouija?
Fakan-tsary momba ny Halloween ary tantara marina
7 Fomba Ahafantarana Ny Halloween Indrindra Hatramin'izao
Famaranana ny Ady Lehibe III sy Nostradamus
Chupacabras Sightings - Tantara Marina
Misy any aorian'ny fiainana ve?
Abraham Lincoln: Vampire Hunter sy zavatra hafa tsy fantatrareo
6 Zavatra tsy fantatra izay tsy te hihaona
Olona be zotom-po izay tokony handoro ny mpanambony avy hatrany
Ny fampielezan-kevitr'i Thomas Nast manohitra ny lehiben'ny tweed
Ahoana no hamandrihana ny masonao sy hanamaivana ny Eyestrain
Elements of Composition: mifanohitra
Tanjona fametrahana miaraka amin'ireo mpianatra fototra
Inona ny adiresin'ny Simpsons?
Profile of Edna St. Vincent Millay
Ny fanalan-jaza miteny
Post Hoc: Famaritana sy ny ohatra momba ny fahalavoana
Anand Karaj Sikhism Guide ho an'ny fampakaram-bady
Mpikaroka any Afrika
Ivy League MOOCs - Free Classes Online avy amin'ny Ivies
Inona no atao hoe Vessel Draft?
Faniratsirana ara-politika sy politika
Sir John Falstaff: Fanadihadiana momba ny toetra
Ny tsiambaratelon'ny maty: Ny mpanjaka very tao Teotihuacan - Review
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny japoney
Mandoa vola avy amin'ny sekoly tsy miankina
Famaritana sy Ohatra ho an'ny Apostolin'i Greengrocer
Fomba fanao ny fitsapana hypothesis amin'ny Function Z.TEST amin'ny Excel
Inona no atao hoe teoria?
Ny Ligy Schmalkaldic: Ady amin'ny Reformation